Maki: adobe omniture | Martech Zone
Tag: adobe omniture
Cision Inowedzera Kufuridzira Kuyera Kuyera Kune Kwavo Ekutaurirana Cloud
Chitatu, July 26, 2017 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Douglas Karr
Chimwe chinhu chakakosha iwe chaunofanira kuchengeta mundangariro muMartech indasitiri ndechekuti makambani mazhinji ari pane inoenderera yekuvandudza kutenderera kusiyanisa uye kukura bhizinesi ravo. Ipuratifomu yawakashandisa makore mashoma apfuura inogona kunge isisatovapo futi. Cision ndeimwe yemakambani ayo andisina kutendeka kubhadhara zvakanyanya senge ndaifanira kuve nawo. Ivo vaive zvirokwazvo mutungamiriri wekugovana pamusika kana zvasvika kune hukama hweveruzhinji,
Distimo: App Analytics, Shanduko uye App Store Yekutevera
Mugovera, December 14, 2013 Douglas Karr
Distimo inopa yemahara nhare mbozha app analytics chikuva chevanogadzira pamwe nedata remusika weapp. Iyo Distimo chikuva inoita kuti vanogadzira vateedzere nharembozha kudhawunirodha, maapplication mari, uye kushandurwa kwemapurogiramu emakampeni mune yavo yega app kune akawanda mashopu ezvitoro. Distimo inopa yavo mobile app analytics yemahara, ichivabvumidza kuunganidza zvinoshamisa mavhoriyamu e data uye nekuvandudza kurongeka mune yavo yakabhadharwa mhinduro, AppIQ. Distimo's AppIQ inopa zuva rega rega kukwikwidza data kune maapps munzvimbo dzakawanda dzemisika yemisika.
Nezuro, ndakataura muDetroit pamuzinda wekambani yenyika dzepasi rose ine zvikwata zvakawanda. Mharidzo yangu yaive yeawa yakareba uye yakanangana nemaonerwo atingaitwa analytics zvakasiyana… kutsvaga ruzivo rwavanga vasingatozive kuti rwuripo kana kuti rwakakanganisa sei bhizinesi ravo repamhepo. Mharidzo yacho yaive nekumwe kuongorora kwe rave uye maawa maviri mumashure, ini ndakanga ndisati ndasiya Detroit. Ini ndanga ndakagara ndichikurukura nevatungamiriri veKushambadzira kubva kune akati wandei e